Iskaashiga cusub ee Vimeo iyo Qalabyada Isku Dhafka ah Waxay U Sameeyaan Sida Halbeegga u ah Sawir qaadayaasha | Martech Zone
Mid ka mid ah shirkadaha deriska nala ah dhismaha istuudiyahayagu waa qaar ka mid ah sawir qaadayaasha cajiibka ah, Tareenka 918. Waxay ku takhasuseen keenista qalabkooda meel kasta oo adduunka ah waxayna soo saaraan fiidiyowyo muuqaal ah. Kaliya maahan tayada shaqada ay soo saaraan taasi waa wax lala yaabo, in kastoo. Waqtigooda intiisa badan waxay ku lumiyaan dhab ahaantii inay horumariyaan sheekada, oo ay u beddelaan muuqaallo, ka dibna ay qorsheeyaan mashaariicdooda si aan fiicnayn. Natiijooyinka ayaa si qoto dheer u fiirsanaya… halkan waxaa ku yaal tijaabooyin qaarkood oo loo maro Shirkadooda Reel:
Waxaan la kulmay mid ka mid ah aasaasayaasha oo aan kala hadlay isaga wixii ku saabsan aaladaha ay adeegsanayaan si ay wada-hawlgalayaashu ula shaqeeyaan ama macaamiisha dib ugu eegaan shaqadooda. Joshua ayaa tilmaamay in vimeo waxay dhawaan balaariyeen qalabkooda, iyagoo siinaya wax kasta oo ay u baahan yihiin. Midka koowaad wuxuu ahaa bogag dib u eegis fiidiyoow ah oo awood u siinaya kuwa wax qiimeynaya inay ku calaamadeeyaan jadwalka wakhtiyada iyaga oo qoraalana ku sheekaysanaya gadaal iyo gadaalba. Midka labaad wuxuu ahaa isdhexgal toos ah Adobe Premiere Pro oo awood u siinaya soo dejinta tooska ah ee Vimeo.
Bogagga Vimeo Video Review
Dib u eegista iyo Qoraallada Wada Shaqeynta - Dib-u-eegeyaashu waxay si toos ah u gujin karaan shaashad kasta oo ay kaga tagi karaan ogeysiis waqtiyeysan. Markaad gujiso qoraalka, waxaad si toos ah ugu boodaysaa qaabka saxda ah.
La wadaag Dib-u-eegeyaasha aan xadidnayn - Si aamin ah ugu dir xiriiriye bogga dib-u-eegista khaaska ah qof kasta - xitaa haddii aysan ku jirin Vimeo.
Lasoco horumarkaaga - Ku soo jawaab waqtiga dhabta ah, ama u rogo qoraalada liisaska si aad u cusbooneysiiso fiidiyahaaga si ka fudud sidii hore.
Vimeo Panel ee Adobe Premiere Pro
The vimeo Guddi Adobe Premiere Pro waxay u oggolaaneysaa farsamayaqaannada wax soo saarka fiidiyowga inay fududeeyaan shaqadooda tafatirka iyagoo siinaya hab si fudud si toos ah uga duubaya fiidiyowgooda softiweerka. vimeo PRO ama xubnaha Ganacsigu waxay ka abuuri karaan boggaga dib u eegista guddiga bilaashka ah. Astaamaha waxaa ka mid ah:
Isla Markiiba Geliya Fiidiyowyo - Toos ugu soo dir fiidiyowyadaada kan vimeo koontada, dooro dejimahaaga gaarka ah intaad soo shubaneyso, soo dejineyso qalabkaaga gaarka ah ee habaynaya, iyo inbadan.
Kaydi Waqtiga Wax Soo Saarka - Diirada saar shaqadaada oo fududee socodkaaga shaqo adigoo soo gelinaya fiidiyowyo isla markaana abuuraya bogag dib u eegis ah adigoon ka tagin Premiere Pro.
Soo dejiso Vimeo Panel for Adobe Premiere Pro
Shaacinta: Martech waa La Xiriiriyaha Adobe ee La Oggol yahay iyo vimeo gacansaar Waxaan uga faa'iideysaneynaa xiriiriyeyaasha xiriirka la leh qodobkaan.
Tags: adobeadobe Ciyaar proFiidiyowyada Suuqgeyntahordhac proiskaashiga fiidiyowgadib u eegista fiidiyahavimeobogagga dib u eegista vimeo
Maxay yihiin Faa'iidooyinka iyo ROI ee ku-habboonaynta Mashiinka Raadinta?
PaveAI: Qof Ugu Dambeyn Jawaab Ka Helay Google Analytics!
Feb 27, 2017 markay ahayd 4:28 PM
Hey Doug, waxaan isku dayay inaan la wadaago macluumaadkan koox filim sameeye ah oo ku taal Facebook, laakiin waxay u bilaabmeysaa sidii fiidiyoow. Kaaga darane, ma ciyaari doono markaad gujiso. Maqaalka laftiisu ma xiriiri doono mana muujin doono.
Feb 27, 2017 markay ahayd 6:42 PM
Facebook sifiican ugama ciyaaro cidna!
Oktoobar 25, 2021 at 8:52 AM
Ma aan sheegi karin maqaalkaaga oo ma heli karo wax lagu xaqiijiyo ama lagu diido goobta Vimeo, laakiin ma ogtahay haddii ay suurtogal tahay in loo oggolaado qaybta 3rd awoodda ay u leeyihiin inay bixiyaan nooc ka mid ah interface si ay ugu dhejiyaan fiidiyowyada xisaabtaada Vimeo. halkii aad ku shubi lahayd milkiilaha akoontiga?
Waxaan qiyaasayaa in xaaladda ugu xun aad isticmaali karto adeegga wareejinta faylalka sida WeTransfer si aad u hesho faylka fiidiyowga oo ka dibna laftaada u gal koontada Vimeo si aad u bilowdo shaqeynta iskaashiga.
Oktoobar 25, 2021 at 2:48 PM
Waa suurtogal - Vimeo wuxuu leeyahay soo geli API. Waxay kaloo leeyihiin a qalab iskaashi kaas oo loo isticmaali karo ka hor inta aan fiidyaha la daabicin si loo wadaago loogana soo ururiyo jawaab celin.